NY FANAMBADIANA ARAKA NY FAMPIANARAN’i Martin LOTERA - Fiangonana Loterana Malagasy
Ny maha mpanota ny olombelona sy ny fahaverezana vokatr’izany ary ny maha Mpamonjy an’Andriamanitra sy ny fanamarinany ny mpanota no ivon’ny fampianaran’i Lotera. Tsy maintsy ho diso izay atao hoe fivavahana na finoana ka mivoaka izany fototra izany hoy Lotera. Tsy maintsy ho diso ny fampianarana, tsy maintsy ho diso ny fitondran-tenan’izay mihevitra sy mampianatra mihoatra noho izany. Eny diso koa ny fampianarana rehefa tsy azo iainana izay lazaina. Eny diso koa ny fitondran-tena rehefa tsy mampihatra izay ampianarina. Koa tsy afaka miresaka ny fanambadiana tena eken’Andriamanitra araka ny Soratra Masina araka izay ampianarin’i Lotera isika raha vao miresaka izany ivelan’ny hafatry ny REFORMASIONA.